Xaniid (; ) waa hilibka waslada marka lagu shiilo dab kali ah. Sidoo kale xaniidku waa nooc ka mid ah hilibka xoolaha, gaar ahaan hilibka laga jaro garabka, jeeniga, lugta, dhabarka iyo meelaha leh jiidh saafi ah. Sidoo kale wasladu waa hilibka laga gooyo muruqa xoolaha kaasi oo leh waxyar oo baruur ah, laakiin inta badan jiidh saafi ah. Waslada waxaa laga diyaariyaa hilibka lo'da, geela, adhiga iyo doofaarka. Hilibka kaluunka iyo digaaga iyo shimbiraha laga sameeyn karo waslada.
↑ http://www.exoticmeatsandmore.com/kangaroo.aspx. Maqan ama ebar |title= (caawin) Retrieved on 23rd December 2014.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Xaniid&oldid=214390"
Last edited on 8 Agoosto 2021, at 22:02
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 Agoosto 2021, marka ee eheed 22:02.